Avotry ny mpamonjy voina ihany: tovolahy marary saina nihanika “pylone”-n’ny Jirama - ewa.mg
News - Avotry ny mpamonjy voina ihany: tovolahy marary saina nihanika “pylone”-n’ny Jirama
Hatairana ny an’ireo mpandalo sy ny
mponina teny Anosizato, omaly maraina, manodidina ny tamin’ny 09
ora. Lehilahy tsy salama saina iray nihanika ny andrin-jiorn’ny
Jirama teny an-toerana. Araka ny fantatra, mitondra herinaratra
mahery vaika eny Anosizato io andrin-jiro io. Efa tonga teny
amin’ny faratampony ralehilahy ka niantsoana ny sampana mpamonjy
voina. « Vao naharay antso izahay dia nidina teny
an-toerana avy hatrany. Efa teny ihany koa ny teo anivon’ny
jirama », hoy ny fanazavan’ny lieutenant-colonel
Razafimanahaka Tiana, lehiben’ny sampana mpamonjy voina etsy
Tsaralalana. Voatery notapahana, araka izany, ny herinaratra tamina
faritra maro mba hisorohana ny loza. Isan’izany ny teny
Ampitatafika, Itaosy, Ambohidrapeto sy ny manodidina.
Voakasik’izany koa ny teny amin’ny digue, Andranoro, Ambohibao sy
ny manodidina. Tapaka ihany koa ny herinaratra teny 67ha, Isotry,
Isoraka sy ny manodidina. « Nananosarotra ny fampidinana
ilay olona teny amin’ilay andrin-jiro », hoy ny
fanazavana voaray. Manampy trotraka izany koa ny aavon’ilay
andrin-jiro. « Antony mahasarobidy ny lanjan’ny fiofanana
ataon’ireo mpamonjy voina », hoy hatrany io
tompon’andraikitra io. Minitra vitsy taorian’izay, tafidina soa
aman-tsara ilay tsy salama saina ary nalefa teny amin’ny hopitaly
Befelatanana, sampana « neurologie ». Taorian’izay,
tonga namonjy azy teny koa ny fianakaviany. Efa niverina amin’ny
laoniny kosa ny famatsiana herinatra teo amin’ireo toerana
Tsy nisy ihany koa ny aina nafoy sy
naratra nandritra ny tranga.
L’article Avotry ny mpamonjy voina ihany: tovolahy marary saina nihanika “pylone”-n’ny Jirama a été récupéré chez Newsmada.
Fasan’ny Karana: MD ilay mpamily kamiaobe nahafaty mpitarika sarety
Naiditra am-ponja vonjimaika (MD) rehefa avy natolotra ny fampanoavana ny mpamilin’ilay kamiaobe nahavanon-doza nifaoka sarety miisa enina teny Fasan’ny Karana, ny zoma lasa teo ka nahafaty tovolahy iray. Araka ny fanazavan’ny polisy misahana manokana ny lozam-pifamoivoizana (BAC), ny alarobia lasa teo no nitrangan’ity lozam-pifamoivoizana ity teny Fasan’ny Karana. Kamiaobe iray avy any Vontovorona nentina mpamily haterina any amin’ny orinasa hiasany eny By-Pass no nifanena tampoka tamina fiara hafa. Tsy nahatana ny familiana ilay mpamily kamiao ka nifatratra tamina sarety miisa enina nipetraka teo amoron-dalana. Lasa nandositra ny mpamilin’ilay kamiao rehefa avy nandona ireo sarety. Fotoana fohy taorian’izay, tonga teny an-toerana ny polisy nanao fizahana ny zava-misy. Maty voatsindry tao ambany kamiaobe ilay niharam-boina. Natory tao anatin’ilay sarety izy tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza ka maty tsy tra-drano. Nokarohina ilay mpamily nahavanon-doza ary nitolo-batana teny amin’ny BAC. Niaiky ny heloka vitany izy nandritra ny famotoran’ny polisy.J.CL’article Fasan’ny Karana: MD ilay mpamily kamiaobe nahafaty mpitarika sarety a été récupéré chez Newsmada.
Ady amin’ny Covid-19 : miantso ny hery politika hiray hina ny evekan’i Morondava
Tsy afaka ny hangina. « Tsy azo atao ny manararaotra ny zava-misy. Fotoan-tsarotra izao iantsoana ny samihafa fiangonana, tahaka ny ataonay miaraka amin’ny FLM. Iantsoana ny firehana politika hiray hina. Tahaka izany koa ny foko samihafa mba hifanampy, hanohana ny mahantra », hoy ny evekan’ny diosezin’i Morondava, ny Mgr Raharilamboniaina Marie Fabien, omaly, tamin’ny haino aman-jery. Nentaniny ny mpitondra sy ny mpitandro filaminana ary ny vahoaka, mitady ny filaminana. Notsiahiviny ny tokony hanarahan’ny rehetra ny fepetra sy ny toromarika omen’ny tompon’andraikitra.Sakafo sy fanafody ho an’ny mahantraEtsy andaniny, nankasitrahiny ny fanohanana sy ny fa­nampiana, indrindra ho an’ny any Menabe, ka nahazoana ny tohana ho an’ny toeram-pitsaboana eo anivon’ny fiangonana katolika any an-toerana. « Ankaherezina ny mpitsabo sy ny mpiasan’ny fahasalamana… Tokony hotohanana amin’ny sakafo sy ny fanafody ireo mahantra », hoy ihany izy. Tsiahivina fa mitentina 90 tapitrisa Ar ny vola voaangona any an-toerana ho amin’izany fanohanana sy fanampiana izany ka nanentanany hatrany ny rehetra ho amin’ny fifanampiana. « Afaka mifanampy na ny mpifanolo-bodorindrina aza. Ny kely an-tanana ho an’ny hafa. Izarao ny sasany fa mampitombo ny fifankatiavana sy ny fihavanana izany. Mba ho fiangonana kely eo anivon’ny tokontrano », hoy ny evekan’ny diosezin’i Morondava.Synèse R.L’article Ady amin’ny Covid-19 : miantso ny hery politika hiray hina ny evekan’i Morondava a été récupéré chez Newsmada.
Mahatsapa ireo orinasa any amin’ny faritra fa lasa ankilabao sy voahilikilika. Tsikaritra ihany koa fa toa tsy misy vokany akory ny fifanankalozan-kevitra niarahan’ny sehatra miankina sy ny sehatra tsy miankina amin’ny fanjakana. Izany indrindra no hikarakaran’ny Vondrona Eraopenina dinika an-databatra boribory momba ny toekarena eto Madagasikara isaky ny herinandron’ny Eraopa. Fanao isan-taona izy ity ho fanatsarana hatrany ny sehatry fandraharahana sy ny fifaninanana ara-barotra ary ny fanamafisana ny fiarahamiasan’ny firenena Malagasy sy ny Vondrona Eraopeanina. Notanterahina ny 6 mey 2019, teny amin’ny Carlton Anosy ny andiany faha-dimy amin’ny adihevitra ara-toekarena Madagasikara-Vondrona Eraopenina. Tomponandraiki-panjakana, tompona orinasa, mpiara-miombona antoka ara-bola sy ara-teknika an-jatony no nandray anjara tamin’ny adihevitra. Nanohana ny adivehitra hatramin’izay ny tetikasa PROCOM, vatsian’ny vondrona eraopeanina. Lohahevitra noresahana tamin’ity taona ity ny “fanantenana vaovao ho an’ny orinasa malagasy”. Nambaran’ny masoivohon’ny Vondrona Eraopeanina, Di Girolamo Giovani fa fotoana hihainoana ny hetahetan’ireo sehatra tsy miankina, hanamorana ny fifanankalozan-kevitra eo aminy sy ny tomponandraiki-panjakana ity hetsika ity. Fotoana hampahafantarin’ny fitondram-panjakana ny politikan’ny governemanta momba ny toe-karena sy ny ara-barotra ary hanavaozana izany ihany koa ny adihevitra. Araka ny fanazavan’ny minisitry ny indostria, varotra sy ny asa tanana, Rakotomalala Lantosoa fa noresahana nandritra ny adi-hevitra ny fomba tsara indrindra ahafahana manampy ireo orinasa any amin’ny faritra ho fampandrosoana handraisan’ny rehetra anjara eto Madagasikara. Nodinihina ihany koa ny fomba hanatsarana ny fifaneraseran’ny sehatra miankina sy tsy miankina. Nanamafy ny ambasaodaorin’ny Vondrona Eraopeanina fa ho havadika ho asa ireo fehin-kevitra nivoaka tamin’ny dinika an-databatra boribory. Ao anatin’ny fanatanterahana ny vina ho Madagasikara misandratra avokoa izany rehetra. Nirina R. Cet article ADIHEVITRA ARA-TOEKARENA: Fanantenana ho an’ny orinasa malagasy est apparu en premier sur déliremadagascar.
Présidence de la BAD : Dr Akinwumi Adesina, seul candidat à l’élection du 27 août
Le président de la BAD, Dr Akinwumi Adesina, avec son fils adoptif malagasy Anthony Manampisoa et ses parents. La réélection du Dr Akinwumi Adesina doit se faire à l’unisson dans un esprit d’acclamation, selon le doyen du Corps diplomatique africain aux Etats-Unis, Serge Mombouli. La transformation de l’Afrique ! C’est le grand défi que la Banque Africaine de Développement (BAD) a décidé de relever, sous le mandat de son président actuel, Dr Akinwumi Adesina. En effet, de nombreuses réalisations sont enregistrées dans les 54 pays d’Afrique, dont Madagascar, qui bénéficient de l’appui de cette première institution financière du continent. On peut citer des projets dans le domaine des infrastructures, de l’agriculture, de l’énergie, etc. Malgré cette grande performance, le président du groupe de la BAD a fait l’objet de fausses accusations. « Aujourd’hui, Dr Akinwumi Adesina est complètement disculpé de tout acte répréhensible par un comité de haut niveau composé de personnalités éminentes dirigées par Mary Robinson, ancienne présidente de la République d’Irlande. Le panel a été créé pour examiner le rapport du Comité d’éthique, des Conseils d’Administration de la BAD, qui était auparavant parvenu à la même conclusion que le Dr Adesina ne s’était pas livré à des pratiques contraires à l’éthique ou à une faute », a souligné Serge Mombouli qui s’exprime au nom du Corps diplomatique africain. Soutiens. Le Dr Adesina est le seul candidat à l’élection du président de la BAD, prévu le 27 août prochain, et a déjà reçu le plein soutien de l’Union Africaine. Ce soutien s’élargit davantage, depuis l’annonce du verdict par le Comité d’éthique du Conseil d’Administration et du Bureau du Conseil des Gouverneurs de la BAD. « Au nom du Corps Diplomatique Africain, nous félicitons le Dr Akinwumi Adesina président de la BAD, pour son leadership visionnaire, ainsi que les résultats de développement exceptionnels atteints par cette prestigieuse institution sous son mandat », a affirmé le Corps Diplomatique Africain accrédité aux Etats-Unis. Celui-ci exhorte les États-Unis d’Amérique, le plus grand actionnaire non régional ainsi que tous les autres actionnaires concernés, à continuer de soutenir fermement le président de la Banque et le groupe de la BAD, en particulier en cette période de pandémie mondiale de Covid-19. Selon les ambassadeurs, il doit continuer à jouer un rôle crucial dans le but de conduire les économies africaines sur la trajectoire de la croissance économique et du développement durable. Antsa R. L’article Présidence de la BAD : Dr Akinwumi Adesina, seul candidat à l’élection du 27 août est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Présidence de la BAD : Dr Akinwumi Adesina, seul candidat à l’élection du 27 août a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ny fiofanana karakarain’ny fikambanana « Terre en mêlées », eo ambany fiahian’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena. Mpiofana miisa 40 mahery, avy amin’ny sehatra samihafa no misitraka izany.Hampihena ny tsy fitoviana eo amin’ny lahy sy ny vavy eto Madagasikara, amin’ny alalan’ny rugby, io no tanjona amin’izao fiofanana izao, izay haharitra herinandro eny amin’ny ANS ( Académie Nationale des Sports) Ampefiloha. Mpiofana avy any faritra sy avy eto Antananarivo no misitraka ny fifampizarana atolotry ny manampahaizana frantsay miisa telo mirahalahy, miaraka amin’ny filoha mpanorina ny fikambanana “Terre en mêlées”. Marihina, voalohany ho an’i Madagasikara izao fampiofanana momba ny rugby “Terre en mêlées” (TEM), omena manampahaizana vahiny, izao. Fifankafantarana teo amin’ny samy mpiofana no nanombohana ny fiofanana, omaly maraina. Nitohy tamin’ny fifampizarana avy amin’ireo manampahaizana sy ny lalao samihafa izany ny hariva.Anisan’ny tonga nanome voninahitra ny fanokafana ny fampiofanana teny Ampefiloha, ny avy eo anivon’ny MJS izay nahitana ny Sekretera Jeneraly, Ralaivao Lovatiako sy ny Tale Jeneraly ny Spaoro, Rakotozafy Rosa. Nanambara ireto solontenan’ny Minisitera ireto fa tena ilaina amin’ny fampandrosoana ny fanatanjahantena malagasy ity tetikasan’ny fikambanana “Terre en mêlées” ity, izay nisaoran’Andriamatoa Lovatiako, ny avy eo anivon’ny Masoivoho frantsay, ny filoha mpanorina ny TEM, ny Talen’ny ANS ary ireo mpiofana voasafidy hiatrika ity fampiofanana ity.Marihina, hisy ny jery todika hatao aorian’ny fifampizarana mandritra ny 6 andro, mialohan’ny famaranana amin’ny fomba ofisialy. Mi.RazL’article Rugby – « Terre en mêlées »: maherin’ny 40 mianadahy manaraka fiofanana a été récupéré chez Newsmada.